"Marketing ayisekho inkonzo ukuba umuntu."
Marketing, ngokuvamile kakade kuchazwa, Nokho, I uyolungisa, akukho ncazelo, kodwa izindlela eziningana ukuthi, ezithathwe ndawonye, Ukwakha umbono obanzi imisebenzi kanye nokusebenza marketing zanamuhla in the world ibhizinisi, umkhiqizo kanye emakethe.
Ngokusho McKenna, Printer, Blackwell, phakathi kwabanye ikakhulukazi endaweni, marketing kuyinto umsebenzi okufanele iqhutshwe kusukela receptionist kubaphathi abaphezulu. Marketing iyinhlangano ifemu uhlamvu nkulumo, Kungumsebenzi yenkampani, wonkana. McKenna iphawula nokuthi injongo yangempela yokumaketha ukunqoba emakethe, ukwenza noma ukuthengisa imikhiqizo nje kuphela.
UPeter Drucker uthi marketing umsebenzi kuphela bese kuphela lena umsebenzi yenkampani. Ubuye uthi umgomo marketing ukwenza ukuthengisa engadingekile. Marketing kufanele baqonde kahle kangaka izidingo ikhasimende, umkhiqizo, noma isevisi, kufanelana nezidingo zamakhasimende kanye uthengisa uqobo.
Philip Kotler has nemibono emibili, omunye nge ndlela social and eyodwa nge ndlela sabaphathi.
Le ndlela social ichaza adayiswe inqubo lapho abantu namaqembu bathole abakufunayo futhi ukuhlangabezana nezidingo zabo, ngokwakha, supply and exchange of izimpahla kanye nezinsizakalo ngokukhululekile nabanye.
Le ndlela zokuphatha, kuthathela incazelo jikelele, njengoba ubuciko bedayisa imikhiqizo kanye, Kamuva, sichaza marketing ukuphathwa njengoba yobuciko nesayensi yokusebenzisa ayisisekelo imiqondo marketing ukukhetha emakethe target futhi uthole, ukugcina kanye ukhule amakhasimende ngokwakha, kwezidingo kanye transmission amakhasimende siqu, a value ephakeme.
Al wesibili kanye Jack Trout aqokomisa lokho abakubiza marketing umthetho wesine, lapho uthi marketing akuyona impi imikhiqizo, Kuyimpi of kunemibono.
Umlobi French, Armand Dayan, ichaza adayiswe iqoqo amasu um, esekelwe isimo ezithile engqondweni, Sihlose ukwanelisa, e izimo ezingcono ezingokwengqondo emakethe, futhi ezimweni ezingcono zezimali for the umthengisi, izidingo zemvelo noma avuswe.
Iphelelisane kwencazelo ngenhla, William Brooks uthi yokuthengisa yimpumelelo professional kumele kube master in the analysis izidingo kanye yokuthengisa zokusebenza.
Would, nokho, de mencionar Leonard Berry e A. Parasuraman nokuhlaziywa relational phakathi marketing kanye nezinsizakalo, lapho uthi kahle inkonzo yokumaketha umqondo esiqinile kwenziwe kahle, a service eceliwe futhi abulawe ngokuphelele.
Leli su Inyunyana futhi ukwenza yilona uphethiloli kulabo abafuna ahole kule mboni service.
Marketing imiqondo futhi izicelo zabo nivuna kwemvelo ngokushesha, odala kuyaqhubeka yayo a marketing izinga okusezingeni, kuqala, yesibili, isizukulwane sesithathu nesesine, abashokobezi marketing, maxi-marketing, amasevisi marketing, ubudlelwane marketing, marketing viral, o marketing de nichos, nokunye.
Zonke lezi nokuqubuka, Izincazelo, nemibono marketing nemikhuba, nathi, empeleni, esingazicabangela kubo njengoba aphelele, noma izandiso, futhi kwemvelo okuqhubekayo kanye ashukumisayo and application, kanye emakethe.
In lokusebenza oluthile, isibonelo, sizosebenzisa amasevisi marketing ukufinyelela ubuhle kwemisebenzi, futhi adale okukhulu ukwethembeka index, kodwa thina angasebenzisa niche marketing for the team futhi singawusebenzisa a bheke network marketing ukwakha isakhiwo distribution channel.
Namuhla sinawo "uSopa de amazwi womculo" namazwi ambalwa technical ukubhekana amasu amasha, ubuchwepheshe kanye nezindlela. Omunye kungaba ibalula: CRM - Management Relationship Customer (Management Relationship Customer), One-to-One (One-to-one) ukwenza Peppers e Rogers Group, Marketing Lateral, Marketing X, Marketing de Rede, E kwangaphakathi Marketing ephumayo, nokunye.
Njengoba bebaningi kangaka imiqondo marketing, izindlela namasu, ukuthi ngisho kubonakala umbhoshongo waseBabele, banikezwe ukwehluka. Uma eqinisweni, setting ngamunye oluhambisana umqondo elula, isicelo ngobulula, lutho uyoke ube ukusetshenziswa ngomqondo ovamile, umuzwa, isipiliyoni kanye nolwazi, ngokusho umkhiqizo, market, isikhathi imvelo, futhi kancane busekelwe ekubukekeni noma yinkimbinkimbi in the ukusetshenziswa "uSopa de amazwi womculo".
Bathi yonke iholela eRoma. Ngoba, bonke "marketings" kuholele lwati lolufanako eziyisisekelo kuchazwe amashumi eminyaka, kodwa nezinye amathuluzi, ubuchwepheshe, implementations, Amagama, Izıhlabane, imikhiqizo kanye nezinsizakalo. It, ecacile, the "incwadi isobho" babe marketing yabo siqu ukuthengisa.
Ukuze uqede, njengoba ngasho umngane wami omuhle futhi wabhekana uBaba, elinye lamaphayona kulolu cwaningo kanye nokuthuthukiswa marketing: "Marketing ayisekho inkonzo ukuba umuntu."
Futhi ukuzivumelanisa - ekushintsheni kwekhulu lamashumi amabili amabili nanye - omunye isigwebo sakhe, kwelinye izihloko wakhe wokugcina: "Le amabili angekhulu lokuqala marketing umuntu, Uyoba ukuba banakekele ngokuyisisekelo umoya, the izisusa, ukutadisha uhlobo mobiles ubulili kanye babe lahlukene ngokujulile ulwazi, ngaphandle kokuba lokho okushiwo ubuqambi exuberant kakhulu. "
← Umqondo Isu
Umqondo Ukuhwebelana Kwembulunga Yonke →
Funda Seis Sigma